Fanisa yako AirPod neako Apple Tarisa Nike + | Ndinobva mac
Nhasi tinofanirwa kutaura zvekare pamusoro peaya mahedhifoni ayo vanhu vazhinji vanoshuvira kuve nawo asi vasati vagadzirisa seti yavo mune yavo Apple Store. Tiri kutaura nezve maAirPods, Apple asina waya mahedhifoni ayo kana iwe ukaashandisa iwo kwekutanga kekunyudzwa zvachose muhunhu uye nesimba rezwi. Ehe, yakafukidzirwa, kunyangwe hazvo paine vazhinji vanoti zvakasarudzika kutenga sarudzo kana kuti ndivo vakaipisisa apuro yave ichigona kugadzira ... Kune vanhu vezvese ...
Nhasi tinoda kukuratidza chishongedzo chatakawana pamambure uye izvo zvinokubatsira kuti uchengetedze maAirPod ako akachengeteka kana uri mumwe weavo vanoshandisa kumhanya. Ichokwadi kuti mune dzimwe nzeve maAirPod haabatike nenzira ingafarirwa nevazhinji ndosaka vari Vazhinji vagadziri vezvishongedzo vakaona mutsinga mune ino "inofungidzirwa" Apple dhizaini dhizaini.
Chishongedzo chatinokuratidza nhasi ipurasitiki bhendi inoshandura yako AirPods kuita mhando yePowerbeats 3 Wireless mahedhifoni. Wedzera kune iwo maviri maokoreti enzeve ayo anotendera iwe kuti uve nemaAirPods akasungirirwa munzeve dzako mune imwe nzira yakasimba. Pamusoro pezvo, sekukuudza kwatinoita mumusoro wenyaya ino, uchadaro kukwanisa kusarudza dhizaini yeimwe yeApple Watch Nike + tambo, iyo iyo nhema neye fluorescent yero muvara kuitira kuti iwe ugone kuva neaya maviri kana mashoma kuti aenzane.
Pasina kupokana, iyi sarudzo inoshamisa kwazvo izvo hazvireve kuti chero nguva iwe unogona kushandisa yako AirPods pasina ichi chinongedzo sezvo uchigona kuzviisa pabhendi nekukurumidza. Mutengo wacho ndewe 18,99 euros uye iwe unogona kuziva zvakawanda nezvake mune iyi link. Une iwo anowanikwa mune mashanu mavara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Fanisa yako AirPod neako Apple Tarisa Nike +
Usatombo kunetseka, 1Password ine sarudzo yekutenga rezinesi pasina chikonzero chekunyorera kwegore